ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန်ချက်ကို အစိုးရက ခုခံတုန့်ပြန် click
- ဒေသန္တရအမိန့်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၈ မြို့နယ်ရှိ NLD ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန် click
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ရခိုင်မျိုးနွယ်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာ click
- ပီနံအိတ်စက်ရုံ လုပ်သားများ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု ၅ ရက်ရှိသော်လည်း မပြေလည်သေး click
- KIO မတရားအသင်းမှ ပယ်ဖျက်ပြီး ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းထားသူများ လွှတ်ပေးမည် click
- ၁၇ (၁) ဦးဘရန်ရှောင်အမှု စီရင်ချက်ချပြီး တပတ်အတွင်း လွှတ်ပေးမည်ဟု ဦးအောင်မင်း ပြော click
- KIO နှင့် ကုလကိုယ်စားလှယ်များ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များထံ သွားရောက် အားပေး click
- စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ကူညီခွင့်ပြုရန် အမေရိကန် တောင်းဆို click
- ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တိုင်း အကြမ်းဖက်မှုများ တိုက်ဆိုင်စွာ ပေါ်ပေါက် click
- မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲ အပစ်ရပ် အကြို သဘောတူ click
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်မှု ကုလသမဂ္ဂ ကြိုဆို click
- အစိုးရတပ်များ ရှမ်းတပ် ဝတ်စုံဖြင့် ပလောင်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ဟု PSLF စွပ်စွဲလိုက် click
- RCSS ၀တ်စုံဖြင့် အစိုးရတပ်မှ သျှမ်းမြောက်ရှိ တပ်ဖွဲ့များအား တိုက်ခိုက်နေ click
- ကျေးလက်တိုင်းရင်းသားတွေကို မြန်မာစစ်တပ်မှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှု ရပ်တန်းကရပ် (၇၀၁ စစ်ဒေသမှူး၏ ရင်ဖွင့်စကား) click
- သျှမ်းပြည်နယ်နေ့က အဓမ္မမှု ကျူးလွန်သည့် တပ်သား ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် ချမှတ်ခံရ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်တို့ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ပေးမည်ဟု ဦးအောင်မင်း ပြော click
- ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ညီညွတ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း click
- မန်တုံမြို့နယ်မှ ရဲဝန်ထမ်းသုံးဦး လုပ်ကြံခံရ click
- လူထု အားကိုးသည့် ချောင်းရေအား တရုတ်ရာဘာခြံအတွက် ၀ တပ်ဖွဲ့ ဖြတ်သုံး click
- ပဲခူးတိုင်း မုန်းမြို့တွင်လည်း အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပြန် click
- မူဆယ်မြို့ အကြမ်းဖက်မှု အချိန်မီ တားဆီးနိုင်ခဲ့ click
- လားရှိုးပဋိပက္ခတွင် ၀င်မပါရန် သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများအား SNLD သတိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန် click
- လားရှိုးမြို့မှာ အခြေအနေ ပြန်လည်ငြိမ်သက် click
- လားရှိုးပဋိပက္ခ နောက်ဆက်တွဲ သံသယရှိသူ ၄၄ ဦးကို ဖမ်းထားပြီ click
- လားရှိုးပဋိပက္ခ လျော့ပါး၊ ဒုက္ခသည် ၁,၀၀၀ ခန့် ရှိနေဆဲ click
- လားရှိုးရှိ မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များ မန်ဆူ ရှမ်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ခိုလှုံခွင့်ရ click
- လားရှိုးမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် ဒုက္ခသည် တထောင်ကျော် ခိုလှုံနေ click
- ပဋိပက္ခအလွန် လားရှိုး (ဆောင်းပါး) click
- ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆန့်ကျင်ကြပါစို့ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်သမက်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရန် တင်ပြ click
- ဇွန်လ ၇ ရက်တွင် ရဲတိုက်ကို ရုံးထုတ်မည် click
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည်သာ အားကိုးရာအဖြစ်စည်းရုံးရန် ဦးခင်အောင်မြင့် ညွှန်ကြား click
- နံရံများတွင် Graffiti ပုံရေးဆွဲသူအား စည်ပင်မှ ကျပ်တသိန်း ဒဏ်ငွေရိုက် click
- လက်ခမောင်းခတ်သံ တညံညံ (ဆောင်းပါး) click
- ကျနော် မမေ့နိုင်သော အဆောက်အဦများ (၂) click
- ခရိုနီဝါဒ ဘာလဲ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- မြစ်ချောင်းသည် နိုင်ငံ၏ အသက် click
“ရွှေမိုးငွေမိုး ငြိမ်းချမ်းရေးမိုး” (ကာတွန်း လဂွန်းအိမ် - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
- ရန်ကုန် စတော့အိပ်ချိန်း လာတော့မည် click
- မြန်မာပို့ကုန်များ စံချိန်မီရန် လိုအပ် click
- ဒေါ်လာဖြင့် အခွန်ကောက်မှုများ ရုပ်သိမ်း click
- အခွန်ဆောင်ရန် ခက်ခဲသဖြင့် တရုတ်ကုန်စည် တရားမဝင် တင်သွင်းမှု များပြား click
- အခွန်မဆောင်သည့် အမြန်ချောပို့ လုပ်ငန်းများကြောင့် ကုမ္ပဏီများ နစ်နာဟုဆို click
- သီးနှံစစိုက်ချိန်တွင် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ပေးရန်လို click
- မန္တလေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ ယခုနှစ် စိုက်ပျိုးရေးစရိတ် ထုတ်မချေးတော့ click
- တရားမဝင် ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားသည့် မြန်မာ ၃၈ ဦး ထိုင်းမှ ဖမ်းဆီး၊ ပစ်ခတ်မှု ရှိခဲ့ဟုဆို click
- မလေးရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ နစ်နာကြေးရရှိ click
- YCPTA အဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး ၅ လအတွင်း ပြန်ဖျက်သိမ်း click
- အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရခြင်းအကြောင်းရင်း ဥက္ကဋ္ဌ မသိ click
- မြို့ရွာ-အိုးအိမ်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ ၅၁ လမ်း အိမ်ရာနေ ပြည်သူတွေ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- မော်လမြိုင်ဂေါက်ကွင်း အဆင့်မြှင့်ရန်နှင့် ဟိုတယ်ဆောက်ရန် ဘတ် သန်း ၁,၀၀၀ အကုန်အကျခံမည် click
- ပခုက္ကူတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိ click
- လိုအပ်ချက်ကြောင့် စစ်တွေတွင် နယ်ဧည့်လမ်းညွှန် ထားမည် click
- မုံရွာမြို့ ကန်သာယာကန်အနီးမှ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်လုံးနှင့် ကျည်ဆံများ တွေ့ရှိ click
- ပျော်ဘွယ်တွင် မိုးမရွာ၍ ရပ်ကွက်အချို့ သောက်ရေပြတ်လပ် click
- မန္တလးတွင် မီးလောင်၊ အိမ် ၄ လုံး ဆုံးရှုံး click
- ရန်ကုန်တိုင်းတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ များနေ click
- ကေ့ထျိုးဘိုးကျေးရွာမှ ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်သူများအတွက် အခမဲ့ ဘော်ဒါဆောင် ဖွင့်လှစ်မည် click
- ဇော်ပိုင်နှင့် အဆိုတော် ၆ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖျော်ဖြေရန် ရောက်ရှိလာ click
- ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ အခြေခံအချက် ၆ ချက်အပြင် အနုပညာဖန်တီးမှုပေါ် မူတည်ပြီး စိစစ်ခွင့်ပြုလျက်ရှိ click
- မန်ယူကစားသမားဟောင်းများ ပါဝင်မည့် ရန်ပုံငွေခြေစမ်းပွဲ လူစာရင်းထုတ်ပြန် click
- သာကေတမြို့နယ် အားကစားကွင်းနေရာအား ဆက်လက်ထားရှိရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြမည် click
- ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖိလစ်ပိုင်က ကစားသမား အနည်းငယ်သာ လွှတ်မည် click
- နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းနှင့် ရွှေတံဆိပ် မျှော်လင့်ချက် click
- ဘောလုံးမြက်ခင်းစိမ်းကို ကျောခိုင်းတော့မည့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှ နာမည်ကျော်များ click
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဖိလစ်ပိုင်က ကစားသမား အနည်းငယ်သာ လွှတ်မယ် ......
. လို.သိရပါတယ် ၊ SEA GAME ဆုတံဆိပ်တွေ ကို
မဟုတ်တဲ.နည်းနဲ. ရအောင်လုပ်ရင် တိုင်းပြည် သိက္ခာ
မတက်တဲ.အပြင် ကျဆင်းစေမှာပါ ၊
... အချိန်ရှိတုန်း နိုင်ငံတကာ အစဉ်အလာအတိုင်း
ပြုပြင် သင်.ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး
နိုင်ငံတကာ ကချီးမွမ်းနေကြတယ် ၊
သမတကြီးကို ဆုပေးဖို. လုပ်သူကလုပ်နေတယ် ၊
ဆင်းရဲသား အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေ ရဲ. လက်တွေ.
ဘ၀တွေက ပိုဆိုးလာနေတယ် ၊
.. လွှတ်တော်ထဲမှာ တင် sitting battle နဲ. အချိန်ကုန်နေကြတယ် ၊
... ဘဏ္ဍာငွေ သိပ်မကုန်တဲ. ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်တဲ.
.... တင်သွင်းဆေးဝါးများ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ၊
... ပြည်တွင်း အစားအသောက်များ ၊ ရေသန်. ၊ (မှို ၊ ဆိုးဆေး၊ ကင်းစင်မှုအပါအ၀င်) အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း ၊
.... ဆေးရုံဆေးခန်း များ ၊ ၀န်ဆောင်မှု မြင်.တင်ခြင်းနှင်. ကုသစားရိတ်များ လျှော.ချပေးခြင်း ၊
... ခရိုနီများ အား တန်ဖိုးနည်း ကျန်းမာရေး ၊ ပို.ဆောင်ရေး စသည်. လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
ညွှန်ကြား ဖိအားပေးခြင်း
.. စတာတွေ ကို အကောင်အထည် ဖေါ်သင်.ပါပြီ ။